Madaxweyne Deni, Ururada Bulshada iyo Madaxda Ururada Siyaasadda oo ka wada hadlay hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan – Kalfadhi
Madaxweyne Deni, Ururada Bulshada iyo Madaxda Ururada Siyaasadda oo ka wada hadlay hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan
August 24, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay kulan la qaatay Ururada Bulshada, Madaxda Ururada Siyaasadda, Aqoonyahanada iyo Waxgaradka Puntland ayaa uga warbixiyey xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka dowliga ah ee laqabtay sida tayeynta Ciidamada, horumarinta hanaanka maaliyadda iyo hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan oo meel wanaagsan maraya .
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa la wadaagay aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo Ururada Bulshada, Shirkii Dowladdu ka qeybgashay ee Dhuusamareeb kaasi oo looga hadlay arrimaha Doorashada Soomaaliya iyo sida Puntland u wajahday. Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale bulshada usoo gudbiyey shaqadii wanaagsaneyd ee laga soo qabtay Gobolka Mudug iyo safarkii uu ku tegay dalka Jabuuti.
Madaxweynaha ayaa dhegaystay fekradaha iyo talo soojeedinta xubnaha kulanka ka qeybgalay, dhammaantoodna waxay ka mahadceliyeen kulanka, iyagoo muujiyay sida ay Dowladda ugu garabtaaganyihiin marwalba arrimaha gudaha ee Puntland iyo doorka Puntland ee arrimaha Soomaaliya.
Madaxda Ururada Siyaasada Puntland oo kulanka ka hadlay, waxay Madaxweynaha uga mahadceliyeen ka dhabeynta nidaamka Dimuqraadiyadda Puntland, oo caawa ay afkaartooda iyo talooyinkooda kusoo gudbinayaan iyaga oo metelaya Ururada Siyaasadeed.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha kulanka kasoo qeybgalay, si gaar ah wuxuu Madaxweynuhu bogaadiyey doorka Ururada Bulshada Rayidka ah ku leeyihiin Dowladdnimada, iyo sida ay marwalbo uga qeyb qaataan marxalad kasta oo markaasi la marayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Puntland iyo Jubbaland ayaa ka horyimid shirkii Dhuusamareeb saddex, iyagoonna dhalliil u jeediyay dowladda dhexe.
Guddiga Arrimaha Bulshada iyo Dhaqanka ee Baarlamaanka Puntland oo ka dooday warbixino muhiim ah
Guddiyada Dastuurka oo ka shiray arrimaha mudnaanta leh ee ku saabsan geedi socodka dib-u-eegista Dastuurka